एकपटक विदेशमा स्टेज प्रोग्राम गरेको ७ लाख कमाउने मोडल रन्जिता लिम्बुको मासिक खर्च ५ हजार मात्र ! - Rochak Khabar
एकपटक विदेशमा स्टेज प्रोग्राम गरेको ७ लाख कमाउने मोडल रन्जिता लिम्बुको मासिक खर्च ५ हजार मात्र !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २९, २०७४ समय: ०:१३:२७
मोडल रंजिता लिम्बु पछिल्लो चरणमा निकै व्यस्त मोडलको रुपमा चिनिन्छिन्। उनको अभिनय निकै जिवन्त र वास्तविकतासँग प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। मोडल रंजिताको जतिपनि म्युजिक भिडियोहरु बजारमा आएका छन् सबैलाई दर्शक स्रोताहरुले अत्यधिक रुचाएका छन्। उनी सरल स्वभावकी हसिली खुसिली र मिलनसार छिन् ।